QM oo cambaareysay Qarax ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR QM oo cambaareysay Qarax ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose
QM oo cambaareysay Qarax ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose
Wakiikla gaarka ah ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxeeysa u qaabilsan arrimaha Somaaliya Mr. James Swan ayaa si xooggan u cambaareeyay Weerarkii lagu qaaday Xafiiskii Guddoomiyaha Gobolka Banadir Mr. Cabdiraxman Cumar Cusman, Eng Yariisoow kaas oo la sheegay in uu geeystay Khasaare isugu jira naf iyo agab xafiisba.
Aniga oo ah James Swan waxaa cambaareeynaya weerarkii baahalnimo ee lagu qaaday hoowlka shirarka gobolka Banaadir oo markaasi uu ka socday kulan ay ku lahaayeen masuuliyinta gobolka banadir.
Waxaa kale uu James Swan intaa ku daray in uu garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed iyo Dowladdooda sida ay uga soo horjeedaan falalka argagixisnimo .
Warar soo baxay oo horudhac ah ayaa sheegaya in ruux isa soo miidaamiyay ama ruux naftiis halige ah uu isku dhex qarxiyay hoolkii uu ka socday kulankii Todobaadlaha ahaa, waxaana halkaasi ku geeriyooday dhowr qof , sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay tira kale.
James Swan oo ah Wakiiilka Qarmada Midoobay ay u xil saartay arrimaha Soomaaliya ayaa la kulmay goor hore Duqa magaalada Muqdisho inta uusan dhicin Qaraxaasi, wuxuuna ka dhageeystay dhab ahaantii Horumarka iyo dhibaatooyinka ka jira gobolka guud ahaan.
Mudane Swan oo hoggaaminaya hawlgallada ay ka waddo jamciyadda Quruumaha ka dhaxeeysa goblka Banaadir iyo guud ahaan Soomaliya ayaa u diray tacsi Dadkii ku geeriyooday weerarkaasi, wuxuu sidoo kale u rajeeyay kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi caafimaad iyo inuu ilaahay si fudud u bogsiiyo dhaawacyadooda.
Previous articleDFS oo guddi u saartay gurmadka dadkii ku waxyeelloobay qaraxa Muqdisho
Next articleHirshabelle oo ka tacsiyeysay Qarax ka dhacay Xarunta Dowladda Hoose